‘भाइरल बनेको सेक्स भिडियोले उसको जिन्दगी तहसनहस बनायो’ - nayakhoj24.com
प्रकाशित मिती: March 6, 2018 | nayakhoj24 admin पढ्न:0मिनेट
यो कथा टिजियाना कैटोनको हो, जसले सेक्स भिडियो भाइरल भएका कारण आत्महत्या गरिन् । अप्रिल २०१५ मा नेपल्सको उपमहानगरिय मुग्नानो क्षेत्रमा बस्ने ३१ वर्षीया टिजियानाले ह्वाट्सएपमा पाँच जनालाई सेक्स भिडियो पठाइन् ।
जुनजुन मानिसहरूले यो भिडियो ह्वाट्सएपमा रिसिभ गरे तिनीमध्ये उनको ब्वाइफ्रेन्ड सर्गियो डी पालो पनि थियो, जससँग उनको सम्बन्ध स्थिर थिएन ।
त्यो भिडियो टिजियानाले कुनै अन्य मानिससँग सेक्स गरेकी थिइन् ।
१५ वर्षसम्म टिजियानासँग साथ गरेकी टेरिजा पेट्रोसिनो सम्झिन्छिन्, ‘उनी धेरै सुन्दर थिइन्, सहज रूपमा विश्वास गर्थी । ऊ गलत समयमा गलत मानिसको सङ्गतमा थिई ।’
उनको भिडियो छिटै कयौ एडल्ट वेभसाइटमा अपलोड गरीए । यद्यपि सेक्स भिडियोले केही नबिगारे पनि उनले भनेको एक वाक्यले उनलाई तहसनहस गरिदियो ।
भिडियोमा उनले सोधेकी छिन्, ‘तिमी भिडियो बनाइरहेका छाँै ब्रावो ।’ यी शब्दले के सन्देश दिन्छ भने उनी खुल्ला स्वभावकी केटी थिइन्, उनलाई सेक्सको समयमा भिडियो बनाउन मन पथ्र्यो ।
भिडियो हेर्ने मानिसलाई के लाग्यो भने यदि फिल्म गर्नमा त यति खुशी छ भने हेर्दा कुनै गुनासो गर्ने छैन । तर इटलीका मानिसहरूले केवल भिडियो मात्र हेरेनन्, उनको कमेन्टका साथै उनको फोटा टिसर्ट र वेभसाइडमा देखिन थाले । के सन्देश गयो भने यो सबै गरेर धेरै खुशी छ ।
सोसियल कमेन्टर सेल्वाजिया लुकैरेल्ली भन्छिन्– ‘मानिसले यसलाई गलत तरिकाले लिए, ऊ एक खुल्ला विचार भएकी केटी हो जसले यसरी भाइरल हुँदा कुनै आपत्ति छैन । तपाईं एक भिडियो सुट गर्न सक्नु हुन्छ । केही मानिससँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ । साथै त्यसमा एक कुरा पनि सामेल छ, तपाईं त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्नु हुन्न ।’
कानुनी लडाइँ यो सबै टिजियानाका लागि धेरै डरलाग्दो थियो । तर उनले यसको सामना गर्ने निर्णय गरिन् । तर कुनै यस्तो तरिका थिएन, उनी भाइरल भएको भिडियो हटाउन सक्थीन ।
उनले यो मुद्दालाई अदालतमा लिएर गइन् । अदालतलाई भनिन् कि उनको अनुमतिबिना भिडियो सार्वजनिक साइडमा अपलोड गरियो । यति सबै हुँदाहँदै पनि उनको जीवन सामान्य रहेन । उनकी आमा मारिया टेरेसा गिग्लियो भन्छिन्, ऊ बाहिर निस्कन चाहँदैन थिइन् ।
‘उनले बुझिसकेकी थिइन्, यो मुद्दा कहिल्यै पनि सामान्य हुनसक्दैन । उनको हुनेवाला श्रीमान, उनका छोराछोरी कहिले न कहिल्यै यी सेक्स भिडियोको बारेमा जानकारी पाउने छन् । किनकि यी कहिल्यै हट्नेवाला थिएनन् ।’
कैयौँ हप्ताको मानिसक पिडापछि आमा मारियाले आफ्नो छोरीको बारेमा पत्रकारलाई भन्ने हिक्मत जुटाइन् । उनले बीबीसीलाई भनिन् ‘मेरो छोरी राम्री केटी थिई तर उसलाई प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । जन्मँदै उसलाई बुबाको साथ थिएन । उसले उनलाई कहिल्यै भेटिन् । यसको असर उनको पूरा जीवनभरी पर्यो ।’
टिजियाना आफ्नो आमासँग बस्थी । उनी इटलियन गीत सुन्थिन्, उपन्यास पढ्थिन र पियाना बजाउँथिन । तर सेक्स भिडियो अनलाइनमा सेयर भएपछि उनको व्यवहार पूरा परिवर्तन भयो । उनी एक्लै बस्न थालिन् ।
उनकी आमा भन्छिन्– ‘उसको जीवन तहसनहस भयो । मानिसहरू उसको मजाक गर्न थाले । उसलाई भद्दा नामले बोलाइन् थालियो ।’
सेप्टेम्बरमा नेपल्सको एक अदालतले आदेश दियो, उनको भाइरल भएको भिडियोलाई वेभसाइटबाट र सर्च इन्जनहरूबाट हटाइयोस् । साथै अदालतले उनलाई कानुनी खर्चका लागि २२ हजार डलर भुक्तानी दिन आदेश दियो ।
यी सबै कार्य भइसकेको थियो । १३ सेप्टेम्बर २०१६ मा मारिया टेरेसा गिग्लियो स्थानीय टाउन हलमा काम गर्न गइन् । छोरी घरमा थिई ।
उनलाई एक फोन आयो ‘मेरो नातेदारले फोन गरे र घर आउन भने । जब म घर पुगे त प्रहरी र एम्बुलेन्स देखे । मैले बुझिसकेँ । उसलाई बचाउने कोसिस गरियो । मेरा छिमेकीले मलाई कारबाट बाहिर आउन दिएनन् । म लगभग बेहोस भएँ । उनीहरू मलाई घरभित्र जान दिइरहेका थिएनन् । मैले उसलाई अन्तिम पटक पनि हेर्न पाइन । जुन दिन उसको मृत्यु भयो, मेरो जीवन पनि सकियो ।’
आमाको सङ्घर्ष टिजियानाको मृत्युले मानिसहरूमा उनको भिडियो हेर्ने कौतुहल झन् बढायो । उनको आमाले ती सबै भिडियो हेरिन । ‘मैले सत्य थाह पाउनु थियो त्यसकारण ती सबै भिडियो हेर्न चाहन्थे । त्यो मेरी टिजियाना थिइन् ।’
उनलाई के लागेको छ भने उनकी छोरीलाई नशालु औषधि खुवाइयो । उनलाई लागेको छ, यो सबै एक आपराधिक षड्यन्त्र थियो । उनी के चाहन्छन् भने उनकी छोरीको पूर्व ब्वाइफ्रेन्ड डी पालो नै भनुन्, भिडियोहरू सेयर गर्नमा उनको भूमिका के थियो ?
‘उनले मेरो छोरी बचाउन मेरो सहयोग गरेनन् । सायद त्यो सत्य थाह पाउनका लागि मेरो सहयोग गर्न सकून ।’ नोभेम्बर २०१६ मा डी पालोसँग १० घण्टासम्म सोधपुछ भयो । अभियोजक जान्न चाहन्थे, के टिजियानालाई आत्म हत्याका लागि उक्साउन कसैको भूमिका थियो ?
टिजियाना कैटोनको आत्महत्याले इटलीमा पोर्नग्राफी र व्यक्तिगत कुरालाई लिएर हुने बहसको दिशा नै परिवर्तन गरिदियो । यो ती सबै मानिसका लागि पनि शिक्षा थियो, जुन अन्तरङ्ग क्षणको भिडियो अनलाइन सेयर गर्छन् ।
टिजियानाको भिडियो अब मुख्य सर्च इन्जनमा पाइँदैन, तर उनको अस्तित्व अहिले पनि छ । उनकी आमा मारिया चाहन्छन्, इटली र युरोपीय सङ्घका बाँकी देश यस्तो तरिका विकसित गरुन्, जसको निजी अपलोड छिटो हटाउन सकियोस् ।
उनी भन्छिन्– ‘म के आशा गर्छु भने टिजियाना कैटोनका नाम खिल्ली उडाउनेको रूपमा नभएर बरु अन्य महिलाको जीवन बचाउने मानिसको रूपमा जानियोस् ।’
युवतीको नाङ्गो शरीरमाथि खानाको परिकार, सेक्स समेत गर्न पाईने ! (फोटो सहित)
नेपाली बजारमा सेक्स टोयको माग बढ्दै, कति पर्छ त मूल्य ?